Maitiro Ekusarudza Iyo Yakakodzera Nhare mbozha App Development Firm | Martech Zone
Makumi gumi apfuura, munhu wese aida kuve nekona kadiki keInternet ine webhusaiti yakagadzirirwa. Maitiro evashandisi vanobatana neInternet ari kushanduka kuita nharembozha, uye chirongwa inzira yakakosha yemisika yakati wandei yekumisikidza vashandisi vavo, kuwedzera mari, uye kugadzirisa kuchengetedzwa kwevatengi.
A Kinvey mushumo zvichibva pane ongororo yeCIO uye Vatungamiriri veMafoni vakawana kuti nharembozha yekuvandudza iri zvinodhura, zvinononoka, uye zvinoshungurudza. 56% yevatungamiriri venhare vakaongororwa vanoti zvinotora kubva pamwedzi minomwe kusvika pagore rinopfuura rimwe kuvaka chirongwa chimwe chete. 7% vanoti vanoshandisa kubva pamadhora mazana mashanu ezviuru kusvika pamadhora zviuru mazana mapfumbamwe paapp, paine avhareji yemadhora mazana maviri nemakumi masere paapp
Iyo chaiyo yekusimudzira yakasimba inogona kugadzira kana kuputsa kubudirira kweapp, izvo zvinoita kuti kusarudza iyo chaiyo ive chikamu chakakomba cheichi chiitiko. Iwe haufanire kunge uri injinjini yesoftware kuti uite sarudzo dzakadzidziswa pane iyo budiriro yakasimba inonyatsokodzera chirongwa chako. Heano mamwe maitiro akanakisa aunofanirwa kufunga kana uchinge wasangana nevanogona kupa.
Unogona Kusimba Iwe Kununura Zvaunoda Here?
Anokwanisa, ane ruzivo akasimba ane hombe portfolio. Kunyangwe zvirinani - vane portfolio ine zvinhu zvine chekuita neyako zano zano. Portfolio yakanaka yekuti iwe uongorore yakapihwa, asi iwe unowana kunzwa kwakasimba kune iyo yakasimba dhizaini zviyero kana iwe uchikwanisa kuona zvinhu zvakafanana neizvo zvauri kutsvaga. Semuenzaniso, ngatiti iwe unoda app inowana yakanakisa shangu dzevakadzi vebhizinesi. Iyo yakasimba inofanirwa kukwanisa kuratidza mamwe maapplication anoenderana kungave mukutenga kana ecommerce - mabhonasi mapoinzi ekuva neruzivo nekutenga shangu.
Usakanganwa kuti ivo vanodawo ruzivo rwekunyora kodhi papuratifomu iyo iwe yaunoda kushandisa kuvhura yako app. Mazhinji ekutanga anotanga nekutanga chirongwa papuratifomu imwe uyezve nekukura kune inotevera kana vangoziva kuti Anwendung anokunda muchitoro cheapp. Tora mutambo unozivikanwa weClash of Clans kubva kuSupercell iyo yagadzira pamusoro pe $ 2.3 bhiriyoni mumakore matanhatu chete. Mutambo yakatanga kuvhurwa Apple Apple uye ndokuzowedzerwa ku Android kana mutambo wacho wanga uri kubudirira kuri pachena. Maitiro aya akadzikisa huwandu hwerutsigiro uye pamusoro zvaidikanwa kuvhura mutambo, kuitira kuti vagadziri veapps uye vagadziri vagone kutarisa kuvandudzwa kwevashandisi vayo pane hunyanzvi hwekugadzira uye kugadzirisa pamapuratifomu akawanda.
Mazhinji ekutanga ane akafanana mutambo wehurongwa, uye yako yekusimudzira yakasimba inofanirwa kuve neyakajeka ruzivo pane yakatarwa chikuva. Ekuvandudza mafemu anowanzo kuve nezvikwata zvine zvese iOS uye Android ruzivo, asi ita shuwa kuti timu yako inyanzvi mune yako tarisiro chikuva.
Kubatana pamwe nekutaurirana maKiyi eBudiriro
Seye mugadziri weapp, iwe uri chinhu chakakosha mune rese chirongwa chekuvandudza maitiro. Vamwe vagadziri veapp vanofunga kuti vanogona kuendesa zano ravo kukambani yekusimudzira, kuwana zvigadziriso vhiki rega rega uye kukanganwa nezve zvimwe zvese. Muchokwadi, iye musiki anofanirwa kushandira pamwe nekambani yakasimba kuti ave nechokwadi chekuti chiratidzo ichi chakanyatso kutaurwa kune vanogadzira.
Isu tinofunga isu pachedu sevashandi vedu vevatengi, tichivatungamira kuburikidza neruzivo rwekuvandudza app. Izvi zvinoreva kuti hatisi seti yekuisa-uye-uye-kukanganwa-iyo, chero; vatengi vedu vanofanirwa kunge vakazvipira kutora chikamu mumitauro yekuita basa, kuyera sarudzo, nezvimwe. Isu tinokweretesa hunyanzvi hwedu, hongu, asi mutengi anobatanidzwa nhanho dzese dzenzira. Iyo yechokwadi yekubatira maitiro kune wese munhu anobatanidzwa. Keith Shields, CEO, Designli
Yese femu ine yavo nzira yekuita chirongwa cheapp, asi akanakisa anogara pasi nemusiki, avabatsire kuendesa zano ravo kupepa, uye vanyatso kunyora zvirevo kusati kwatanga kukodha. Nekuti iro rekusimudzira timu iri nyowani kune iyo pfungwa, danho iri rakakosha kwazvo uye rinoda mushandirapamwe wakanaka pakati pemapato maviri
Vagadziri vako vachazoda nguva yekugadzira nekunyora chirongwa ichi, asi timu inofanirwa kuve nemaneja weprojekti anowanikwa kuti utaure kana iwe uine chero mibvunzo.
Funga nezve yako budiriro yakasimba se mubatsiri uye chikamu chechikwata chinounza yako zano zano kuhupenyu.
Chiitiko cheVashandisi Chinopfuura Kungogumira Graphics uye Marongero
Kwemakore, chinongedzo cheapp chaive chakaiswa mukati pamwe neruzivo rwevashandisi. Iwo maviri akashandiswa mukuchinjana, asi iko kuda kwekuzvipatsanura muzvikamu zvakasiyana zve dhizaini uye kugadzira nzvimbo nyowani yekudzidza. Vagadziri vemapurogiramu matsva vanowanzo kuwana ruzivo rwevashandisi uye mushandisi interface kuvhiringidzika Mushandisi interface ndeye mabhatani, dhizaini uye dhizaini inopindirana neako mushandisi. Chiitiko chevashandisi ndiko kurerukirwa kwekushandisa uye nekudyidzana kusangana uko kunopihwa nezvinhu izvi.
Semuenzaniso, unogona kunge uine bhatani rinoendesa ruzivo. Bhatani iri chikamu chemushandisi mushandisi. Anoshandisa anonyatsonzwisisa here kuti bhatani iri rinoshandiswa kuendesa ruzivo uye rinogona kuwanikwa zviri nyore papeji. Ichi chikamu cheichi chiitiko chevashandisi. Icho chiitiko chevashandisi chakakosha pakubata kwevashandisi, icho chinotyaira kuisirwa uye kuchengetedza kwevashandisi.
Yako femu yekusimudzira inofanirwa kuve nekutarisisa kwakajeka paUI (mushandisi interface) uye UX (ruzivo rwevashandisi). Ivo vanofanirwa kuve nekunzwisisa kwakajeka kweiyo intuitive dhizaini iyo inobatsira vashandisi zvirinani kufamba paapp.
Iwe urikubvunza iwe kuti ungazive sei chinhu chakadai? Sezvo iwe uine iyo femu's portfolio, iwe unogona kuziva kuti vanoshanda sei neUX nekurodha pasi maapplication avo zvakanyanya papuratifomu iwe yaunoda kunongedza. Android neIOS vane zvimwe zvakavanzika dhizaini dhizaini, uye aya ma nuances anonzwisiswa nevashandisi vanofarira. Dhawunirodha iyo app, shandisa zvimiro zvacho, uye ongorora kana dhizaini iri intuitive uye inoita kuti zvive nyore kufamba.
Chii Chinoitika Panguva Yekutumirwa?
Kune mafemu ayo anozopa kodhi yekodhi uye oisiira kumutengi kuti aone zvimwe zvese, asi izvi zvinongoshanda chete kana musiki weapp aine remukati, rake rake timu revagadziri kana ane rumwe ruzivo rweapp. Sarudzo iri nani yakasimba iyo inokutsika kuburikidza neichi chiitiko kubva kuapplication zvinyorwa uye dhizaini yekuendesa iko kunyorera. Kusiya mutengi kuti atarisane nekutumirwa ega hakuzopedze zvizere chirongwa, uye vanogadzira vanofanirwa kuve varipo kutungamira mutengi nenzira iyi.
Iwe uchave nemusangano wekupedzisira panogadzirwa chigadzirwa chakapedzwa. Ukangosaina kusaina, inguva yekufambisa iyo app kubva kune yekuvandudza nharaunda kune yekugadzira. Unoda maakaundi ekuvandudza pane makuru ezvitoro zveapp, asi yakanaka firm inobatsira kufambisa kufamba.
Chitoro chega chega cheapp chine zvido zvaro, uye rakasimba rekusimudzira rakasimba rinoziva izvi zvinodiwa kubva mukati nekunze. Ivo vanogona kubatsira iye mugadziri kugadzirira iyo kurodha sekutora yekushambadzira mifananidzo yakagadzirira, kusanganisa chero analytics kodhi, uye kurodha sosi kodhi kunzvimbo chaiyo.
Iwe ungangoda kubvunzurudza uye kusangana nemasangano akati wandei ekuvandudza maapps usati wawana chaicho. Iwe unofanirwa kunzwa wakasununguka nefemu yaunosarudza uye unzwe uine chivimbo chekuti vanokwanisa kubata chirongwa chako nehunyanzvi uye nekuzvipira.
Unoita izvi nekubvunza mibvunzo yakawanda - yakawanda sezvaunoda nezve app yako nemaitiro avanoshandisa kuita kuti chirongwa chiitwe. Iwe unogona kunyange kutarisa kuongororwa kana vaine chero. Unogona kuenda munharaunda kana kutsvaga yakasimba online, chero iwe chaunoda chero bedzi basa rikabatwa nemazvo uye rakaburitswa neadiki madambudziko emutengi sezvinobvira.
Tags: nharembozha yeappmobile app development